कसरी लोकबहादुर प्रहरीको ‘नोटिस’मा परे? -
कसरी लोकबहादुर प्रहरीको ‘नोटिस’मा परे?
by Mangal ६ दिन अघि0Comment
संखुवासभाको मादी–१ खोलागाउँका एकै परिवारका ६ जनाको हत्यापछि अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले अभियुक्त पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।
हत्या घटनापछि अनुसन्धानका लागि प्रदेश १ का डीआईजी अरुणकुमार बीसी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का डीएसपी रुगम कुँवर, संघीय प्रहरी इकाइबाट एसपी भीम ढकालको टोली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका डीएसपी लालध्वज सुवेदीको टोली, इलाका प्रहरी कार्यालयको अर्काे टोली पुगेको थियो । ती सबै टोलीले आ आफ्नो तवरले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । फलस्वरूप हत्याको पाँचौं दिन प्रहरीले २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई हत्या अभियोगमा पक्राउ गर्यो ।
विविध पाटोमा अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरी टोलीले सुरुदेखि नै उनलाई आशंकामा नराखेको होइन । तर, विश्वस्त प्रमाण भने फेला पार्न सकेको थिएन ।
सुरुमै उनीप्रति आशंका गरिनुको पहिलो कारण हो, मृतक तेजबहादुर कार्कीको शव भएको ठाउँ । उनले जुन ठाउँमा तेजबहादुरको शव छ भनेका थिए, त्यो ठाउँबाट शव देखिँदैनथ्यो । त्यसो भए उनले कसरी त्यो ठाउँमा शव छ भने त ? प्रहरीले उनको यो भनाइलाई नोटिस गर्दै उनलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो । र, भित्री रूपमा जवाफ पनि खोजिरहेको थियो । तर, उनको हाउभाउ, व्यवहार, शारीरिक अवस्थाका कारण प्रहरी आफंै अलमलमा परेको थियो ।
मृतक लोकबहादुरको घरबाट करिब २० मिटरको दूरीमा तेजबहादुरमाथि पहिलोपटक प्रहार भएको थियो । जुन ठाउँमा रगत पनि देखिएको थियो । तर, भाग्ने क्रममा उनी सडकको तल्लो भागमा पुगे । त्यहीँ उनको मृत्यु भएको थियो । तर, बाटोबाट शव भने देखिँदैनथ्यो ।
तर, कक्षा १० मा अध्ययनरत नातामा लोकबहादुरका भाइ पर्ने एक किशोरलाई उनले तेजबहादुरलाई कसले मारेछ भनेर सोध्न लगाएका थिए ।
उनीमाथि प्रहरीले शंका गर्नुको अर्काे कारण हो, तेजबहादुरको हत्या भएको स्थान । तेजबहादुरको हत्या भएको स्थान लोकबहादुरको घरनजिकै थियो । यदि कोही आपराधिक गिरोहले तेजबहादुर र उनको परिवारको हत्या गरेको थियो भने उनकै घर आसपासमा हुन सक्थ्यो । तर, कसरी लोकबहादुरको घरनजिक हुन गयो ? यसलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानको विषय बनाएको थियो ।
अर्काे कुरा हो, जुन ठाउँमा तेजबहादुरको हत्या भएको थियो , त्यसबेला लोकबहादुरका बाबु र भाइ घरमा थिएनन्, लोकबहादुर मात्रै थिए । यदि बाहिरका मान्छेबाट तेजबहादुरको हत्या भएको थियो भने नजिकै रहेका उनले किन थाहा पाएनन् ?
जुन ठाउँमा तेजबहादुरको शव भेटिएको थियो, त्यहाँबाट २५-३० मिटरको दूरीमा सासुबुहारीको शव भेटिएको थियो । सय मिटरको दूरीमा नाबालक नाबालिकाको शव भेटिएको थियो । ८४ वर्षीय वृद्धाको घरमै हत्या भएको थियो । यो विषयलाई पनि प्रहरीले गम्भीरताका साथ लिएको थियो । घटनास्थललको गम्भीर पाटो केलाउने क्रममा प्रहरी टोली चिनेजानेको मान्छेकै हातबाट घटना भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । अझ प्रहरी टोली एक कदम अघि बढेर यसमा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको ठहरमा पुगेको थियो ।
जब घरभित्रै ८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नगद र गरगहना सुरक्षित रूपमा भेटिए, प्रहरी आर्थिक कारण हत्या नभएको निष्कर्षमा पुग्यो । अर्काे कुरा, मारिएका महिलाले लगाएका गहना पनि उनीहरूकै साथमा थियो । त्यसपछि मात्रै हो, प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानको पाटोलाई बदलेको ।
त्यसपछि प्रहरीले लोकबहादुरको घर खानतलासी गर्यो । जब प्रहरीले उनको घरभित्र रहेको बाकसमा रगत लागेको हाफपेन्ट र कालो भेस्ट भेट्यो, उनैले हत्या गरेको भन्ने प्रमाण बलियो बन्दै गयो ।
तर, पनि लोकबहादुरले हत्या गरेको सहजै स्वीकार गरेनन् । बरु प्रहरी केरकारमा उनले सुबद प्रमाण मागिरहे । चित्त बुझ्दो प्रमाण दिएको खण्डमा आफूले हत्या घटना स्वीकार गर्ने वचन दिए । तर, प्रहरीको अगाडि उनको केही जोड चलेन । अन्तिममा हत्या स्वीकार गरे । एउटै चिर्पटले ६ जनाको टाउकाेमा हानेर हत्या गरेका थिए ।
चन्दननाथ नगरपालिका–४ मालाभिड गाउँका माथिल्लो बस्तीका ३५ घरधुरीमा खानेपानीको चरम संकटबाट गुज्रिरहेका छन् ।
उदयपुरको धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल रौता पोखरीलाई प्रदेशकै धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउन स्थानीय तह